के तपाइँ वेब डेटा स्क्र्याप गर्न चाहानुहुन्छ? Semalt नि: शुल्क वेब डाटा निकासी सफ्टवेयर परिचय
वेबसाइटबाट जानकारी प्राप्त गर्नु विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गर्ने जटिल तकनीक हो। केही विषयहरूमा डाटाको भोल्युम संकलन गर्न चाहने संस्थाहरू निम्न कार्यक्रमहरूबाट लाभान्वित हुन सक्छन्:
स्क्र्यापर एक Chrome विस्तार हो जुनसँग सुविधाहरूको विस्तृत श्रृंखला छ। यो केवल डाटा स्क्र्यापर मात्र होइन एक खोजशब्द अन्वेषक हो। यो अत्यधिक परिष्कृत उपकरण होइन जुन गुगल स्प्रिडशिटमा तपाईंको डाटा निर्यात गर्न सक्दछ। तपाईंको डाटा प्रतिलिपि गरी यसको स्प्रिेडसिटमा भण्डार गरिनेछ, OAuth लाई धन्यबाद गर्दछ। स्क्र्यापर दुबै प्रोग्रामर र गैर प्रोग्रामरहरूको लागि उत्कृष्ट छ।
२. वेब फसल
वेब हार्वेस्ट बिभिन्न कन्फिगरेसन विकल्पहरूको साथ आउँदछ र एक उत्तम खुला स्रोत डेटा निकाल्ने कार्यक्रम हो। यो जाभामा लेखिएको छ र दुबै आधारभूत र उन्नत वेबसाइटहरूबाट डाटा संकलन गर्दछ। वेब फसल मुख्य रूपमा XML वा HTML- आधारित वेब पृष्ठहरूलाई लक्षित गर्दछ।
Scrap अझै अर्को अद्भुत डेटा स्क्र्यापिंग उपकरण हो । यो दर्जनौं सुविधाहरू र विकल्पहरूको साथ पूर्ण क्रलि cra् क्रलि framework्ग फ्रेमवर्क हो। Scrappy चाँडै संचालन गर्दछ र तपाईं डाटा को वांछित ढाँचाहरू प्राप्त गर्दछ। यो केवल तब प्रयोग गर्न सकिन्छ जब तपाईं आफ्नो उपकरणमा पायथन स्थापना गर्नुभयो। थप, तपाईंसँग यस प्रोग्रामिंग भाषाको आधारभूत समझ हुनु आवश्यक छ।
FMiner एक उत्तम र सबै भन्दा उपयोगी डाटा निकासी उपकरण हो। अन्य समान कार्यक्रमहरूको तुलनामा, FMiner अधिक विश्वसनीय छ र राम्रो सुविधाहरू छन्। यसले सबै भन्दा जटिल वेबसाइटहरूबाट डाटा निकाल्छ र जाभास्क्रिप्ट र AJAX ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ। यसले तपाइँलाई MySQL र Oracle ढाँचाहरूमा तपाइँको आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ।
आउटविट एक उत्तम र सबै भन्दा उपयोगी डेटा निकाल्ने कार्यक्रम हो। यो फायरफक्स एक्स्टेन्सन हो डाटा लोड गर्ने गुणहरूको भारको साथ। आउन्डविटले तपाईंको वेब खोजी सरल गर्दछ र स्वचालित रूपमा विभिन्न वेब पृष्ठहरू मार्फत ब्राउज गर्न मद्दत गर्दछ।
Data. डाटा उपकरणपट्टी
डाटा टूलबार तपाईंको सहजताको लागि डाटा स्क्र्यापिंग प्रक्रिया स्वचालित गर्न सक्दछ। यदि तपाइँ बिभिन्न वेब पृष्ठहरुबाट डेटा स looking्कलन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र पोइन्ट पोइन्ट जानकारी चाहानुहुन्छ भने तपाईले डेटा टूलबार प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
आईमक्रोसको उत्तम विशेषता यो हो कि यसले दोहोर्याउने कार्यहरू स्वचालित गर्न सक्दछ। चाहे तपाईं यसलाई फायरफक्स वा गुगल क्रोममा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, आईमक्रोसले सबै ब्राउजरहरूलाई समर्थन गर्दछ र तपाईंलाई वेब पृष्ठहरूको ठूलो संख्यामा नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ। थप, यसले वेब टेबल्स र सूचीलाई उपयोगी जानकारीमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ।
Google। गुगल वेब स्क्रेपर
यो एक ब्राउजरमा आधारित डाटा निकाल्ने प्रोग्राम हो जुन आउटविट र Import.io जस्तो काम गर्दछ। गुगल वेब स्क्र्यापर दुबै पाठ र पीडीएफ फाइलहरूबाट डाटा निकाल्न डिजाइन गरिएको हो। तपाईंले आवश्यक डाटा हाइलाइट गर्नुपर्नेछ, र यो उपकरणले तपाईंलाई एक घण्टामा अपेक्षित प्रतिलिपिहरू दिनेछ। तपाईं आफ्नो डाटा गुगल ड्राइवमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
एक्स्ट्रैक्टि एक अपेक्षाकृत नयाँ तर अचम्मको स्क्र्यापिंग प्रोग्राम हो जुन मेशिन लर्निंग टेक्नोलोजीद्वारा संचालित हुन्छ। तपाईं यस कार्यक्रमको साथ एपिआइहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र केही सेकेन्डमा सम्पूर्ण वेबसाइट क्रल गर्नुहोस्।